သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (နိဂုံး) | ဧရာဝတီ
ထက်အောင်ကျော်| December 8, 2012 | Hits:6,120
7 | | ကြွေလွင့်သွားသော ကြယ်ပွင့်များ
လူဆိုတာ သေနေ့ရောက်ရင်၊ သေကံစေ့ရင် သေရမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပေမယ့်နှစ် ၆၀ ကျော် ပြည်တွင်းစစ် ကာလအတွင်း သေဆုံးသွားသူ အားလုံးဟာ သေနေ့ရောက်လို့၊ သေကံစေ့လို့ သေသွားသူတွေချည်းတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံကာလအတွင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ ထောင်နဲ့ချီရှိတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူ၊ ရဟန်းရှင်လူတွေ၊ နောက်တခါ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးမှာ ကျဆုံးသွားသူတွေဟာလည်း သေကံရောက်လို့ သေသွားသူတွေချည်း မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀ ကျော်ကာလအတွင်း လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ဆင်နွှဲရင်းနဲ့ တောတောင်တွေကြားမှာ လူမသိသူမသိနဲ့ ကျဆုံးသွားကျတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် “ရဲဘော်သူငယ်ချင်း” တွေကိုရော သေကံရောက်လို့ သေသွားသူတွေလို့ ကျနော်တို့ ဘယ်ပြောလို့ဖြစ်ပါ့မလဲ။
ABSDF ဗဟို (absdf.com) စစ်ရုံးချုပ်က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့အထိ တရားဝင် စာရင်းဇယားတွေအရ နှစ် ၂၀ ကျော် ကာလအတွင်း ကျဆုံး၊ သေဆုံး၊ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရ ကျောင်းသားဦးရေဟာ ၁၀၂၄ ဦး ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ တိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးသူ ၃၅၃ ဦး၊ ငှက်ဖျားအပါဝင် ရောဂါမျိုးစုံနဲ့ သေဆုံးသူ ၂၇၂ ဦး၊ တိုက်ပွဲအတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ ၃၉၉ ဦးရှိပါတယ်။ ABSDF ဟာ အခုချိန်အထိ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစာရင်း ထပ်တိုးနိုင်သေးတယ်ဆိုတာ သံသယရှိစရာ မလိုပါဘူး။ အထူးသဖြင့် လက်ရှိအစိုးရကို လက်နက်ကိုင် တိုက်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) နဲ့အတူ ကျောင်းသားတပ်မတော် – မြောက်ပိုင်း (ABSDF-NB) တပ်တွေဟာ စစ်အစိုးရတဖြစ်လဲ အရပ်သားအစိုးရ တပ်တွေကို ခုခံတော်လှန်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ABSDF တခုလုံးရဲ့ ကျဆုံး၊ သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရစာရင်းထဲကနေ ကျနော်သိတဲ့၊ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ် ၂၀၁ တပ်ရင်း မင်းသမီးစခန်းနဲ့ အိမ်နီးချင်း ၂၀၃ တပ်ရင်းက အကျဆုံးစာရင်း တချို့ကို ဒီနေရာမှာ တင်ပြချင်ပါတယ်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ ၂၀၁ တပ်ရင်း မင်းသမီးစခန်းမှ ရဲဘော်ဟောင်းတွေ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ “ကြွေလွင့်သွားသော ကြယ်ပွင့်များ” မှတ်တမ်းစာအုပ်ငယ်အရ ၁၉၈၈ ကနေ ၁၉၉၇ မင်းသမီးစခန်း ခွာစစ်ပြီးချိန်အထိ ကျဆုံး၊ သေဆုံးဦးရေ ၈၁ ဦးရှိပါတယ်။ ဒါဟာ တပ်ဖွဲ့ဝင်အား ၃၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ၂၀၁ တပ်ရင်း မင်းသမီးစခန်း တခုတည်းရဲ့ ကျဆုံးစာရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာ တော်လှန်ရေးအစောပိုင်း ကာလအတွင်း လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရသလိုလိုနဲ့ ပျောက်ဆုံး သွားသူ ၈ ဦး၊ ငှက်ဖျားအပါအ၀င် ရောဂါပေါင်းစုံနဲ့ သေဆုံးသူ ၁၀ ဦး၊ ရေနစ်သေဆုံးသူ ၂ ဦး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လုပ်ကြံသူ ၂ ဦးကလွဲရင် ကျန် ၅၉ ဦးစလုံးဟာ တိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးသူနဲ့ ရှေ့တန်းနယ်မြေအတွင်း တဖက်ရန်သူရဲ့ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်း ခံရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေ ၃၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ တပ်ရင်းတခုမှာ ကျဆုံး၊ သေဆုံးဦးရေ ၈၁ ဦးဆိုတာဟာ ABSDF တပ်ရင်းတွေထဲ အကျအဆုံးအများဆုံး တပ်ရင်းလို့တောင် ပြောနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
ကိုတင်လေး၊ ကိုမြင့်သိန်းနဲ့ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားသူများ
သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး ဆောင်းပါးအစ ပထမဆုံးအခန်းမှာ ဖော်ပြပါရှိခဲ့တဲ့အတိုင်း ထားဝယ်ကောလိပ်နဲ့ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်တွေမှာ ၅ နှစ်နီးပါး ကျနော်နဲ့အတူ ကျောင်းတက်ခဲ့သူ၊ အားကစား အတူတူလုပ်ခဲ့သူ၊ မီတာ ၄၀၀ အပြေးနဲ့ ရေကူးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သူ၊ ရုက္ခဗေဒ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ကိုတင်လေး။ ၈ လေးလုံးကာလအတွင်း ထားဝယ် တနယ်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ကျနော်တို့နဲ့ အတူတူ တောခိုလာခဲ့သူ ကိုတင်လေး။ သီဘောဘိုးစခန်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတဲ့ ABSDF ဖွဲ့စည်းရေး အစည်းဝေးဆီ မင်းသမီးခစန်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့သူ ကိုတင်လေး။ ထားဝယ် ကျောင်းသားတွေတင်မက မင်းသမီးစခန်းရောက် ကျောင်းသားအားလုံးနဲ့ ဗဟိုဖက်က ကျောင်းသားတွေကပါ လေးစားခဲ့တဲ့ ကိုတင်လေးဟာ တောထဲရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။
ထားဝယ်မြို့ ပုံကျွန်းရပ်နေ ကိုတင်လေးနဲ့အတူ ပျောက်ဆုံးသွားသူ တခြား ၂ ဦးကတော့ ဇရစ်ရပ်နေ သွားဖက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသား ကိုအောင်မိုးမြတ်နဲ့ ကညုံရပ်နေ စိတ်ပညာ ဒုတိယနှစ် (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် လှိုင်နယ်မြေ) ကျောင်းသား ကိုကျော်အောင်တို့ ဖြစ်တယ်လို့ မင်းသမီးစခန်း ရဲဘော်ဟောင်းတွေ ထုတ်ပြန်တဲ့ “ကြွေလွင့်သွားသော ကြယ်ပွင့်များ” စာအုပ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးတဲ့နေရာဟာ KUN တပ်မဟာ ၄ ဌာနချုပ်၊ မြိတ်-ထားဝယ်ခရိုင်ရုံးနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ကန်ချနပူရီမြို့ဆီအသွား လမ်းပေါ်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီစာအုပ်ငယ်ထဲမှာ အသေးစိတ်နီးပါး ဖော်ပြထားပါတယ်။
၁၉၇၄ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့် ဈာပနအခမ်းအနားမှာ ပါဝင်မှုနဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်ကနေ ကျောင်းထုတ်ခံရသူ၊ ထောင်ချခံရသူ၊ ပြီးတဲ့နောက် ကျောင်းဆက်တက်ခွင့် မရတော့တဲ့အတွက် စာပေးစာယူနဲ့ ဥပဒေဘွဲ့ရအောင် ကြိုးစားခဲ့သူ၊ ထားဝယ် တနယ်လုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ တပ်ဦး အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ ရှေ့နေသမဂ္ဂမှ ကိုမြင့်သိန်းကတော့ ၁၉၈၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ အလားတူ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့ အဲဒီစာအုပ်ငယ်က ဆိုပါတယ်။ ထားဝယ်မြို့ ဦးကျော်ရင် (မီးပုံးပျံ) လမ်းနေ ကိုမြင့်သိန်းနဲ့အတူ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ တခြား ၂ ဦးကတော့ ဦးကျော်ရင်လမ်းနေ ဒုတိယနှစ် အရှေ့တိုင်းပညာ (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) မှ ကိုစိုးစိုးနဲ့ ဇရစ်ရပ်နေ ဒုတိယနှစ် ဓာတုဗေဒ (ထားဝယ်ကောလိပ်) မှ ကိုစိုးအောင်ခင်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကတော့ တနင်္သာရီမြစ်နံဘေး ဆင်ဖြူတိုင်ရွာ ၀န်းကျင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီစာအုပ်ငယ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ABSDF ဗဟိုပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်၊ ၀ရဇိန်စာစောင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့ ဘန်ကောက်နဲ့ မင်းသမီး စခန်းအကြား အ၀င်အထွက် လုပ်နေရင်းနဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားသူ တဦးကတော့ ရန်ကုန်သား ကိုထွန်းထွန်းအောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီး ပျောက်တဲ့နေရာကတော့ တပ်မဟာ ၄ ဌာနချုပ် ထီးခီးနဲ့ ကျောင်းသားစခန်းရှိရာ အမရာရွာ အကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတဦးဖြစ်တဲ့ ပုလောမြို့၊ စပယ်လမ်းမှ ၀င်းဇော် ခေါ် မဲတုံးကတော့ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှာ ပျောက်ဆုံးတာဖြစ်ပြီး နေရာကတော့ မင်းသမီးစခန်းနဲ့ ပြည်ခြားရွာဆီအသွား တနင်္သာရီမြစ်ဘေး တနေရာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီစာအုပ်ငယ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီပြဿနာတွေဖြစ်ချိန်မှာ ကျနော်ဟာ မဲဆောက်နဲ့ မာနယ်ပလောဘက် ရောက်နေပြီး KNU ဒေသ ABSDF နယ်မြေကော်မတီမှာ တာဝန်ထမ်းနေတဲ့အတွက် ဒါတွေကို အတိအကျ မသိလိုက်ပါဘူး။ အကြမ်းအားဖြင့်ကတော့ အဲဒီတော်လှန်ရေး အစောပိုင်းကာလ အခြေနေတွေဟာ ရှုပ်ထွေးနေဆဲ ဖြစ်ပြီး ရဲဘော်အချင်းချင်းကြား တယောက်အကြောင်းတယောက် အသေအချာ မသိကြသေးသလို မဟာမိတ်တွေကလည်း အားလုံးကို သံသယ မျက်လုံးတွေနဲ့ စုံစမ်းနေဆဲကာလမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ စခန်းကော်မတီအဖြစ် တာဝန်ယူနေစဉ်ကာလ ၁၉၉၀ အောက်တိုဘာမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိုထွန်းထွန်းအောင် ပျောက်ဆုံးမှုကိုတော့ ABSDF ဗဟိုက ထုတ်ဝေတဲ့ Dawn စာစောင်ထဲအထိထည့်ပြီး ဒီအမှုကို အများသိအောင် ကျနော်တို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ နောက်တခါ ကျနော်တို့ မင်းသမီးခစန်းကော်မတီနဲ့ KNU မြိတ်-ထားဝယ် ခရိုင်ကော်မီတီတို့အကြား ပူးတွဲစုံစမ်းရေးကော်မရှင် တခုဖွဲ့ပြီး ဒီအမှုကို စုံစမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမာ့် အခြေနေအမျိုးမျိုးကြောင့် အမှုမှန်ပေါ်တဲ့အထိ မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုအမှုမှန်ပေါ်တဲ့အထိ မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပူးတွဲစုံစမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တဆက်တည်း ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ၂၀၃ တပ်ရင်းက ရဲဘော် ၁၃ ဦး ပျောက်ဆုံးမှုကိစ္စကိုလည်း အလားတူ ကော်မရှင်ဖွဲ့ စုံစမ်းခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ ၂၀၃ နဲ့ ၂၀၁ ဟာ သီးခြားစီဖြစ်ပေမယ့် ၁၀၁၊ ၂၀၁ နဲ့ ၂၀၃ တပ်ရင်း ၃ ခုပေါ်မှာ ဗလဖ ခေါ် ဗဟိုအလုပ်အဖွဲ့ (တောင်ပိုင်း) မှာ ကျနော်ပါတဲ့အတွက် အဲဒီစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ထဲ ပါဝင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကျနော် မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် ABSDF ဗလဖ မှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကိုမျိုးဝင်း၊ အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် ကိုသိန်းဆောင်၊ ကိုသောင်းထွန်းနဲ့ ကျနော်တို့ ၄ ဦးပါဝင်ပါတယ်။ KNU ဖက်ကတော့ ခရိုင်အတွင်းရေးမှူး ပဒိုနီးနီးနဲ့ ၃ ဦးပါဝင်ပါတယ်။ တပ်မဟာ ၄ ဌာနချုပ် ထီးခီးရုံးမှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက် အခင်းဖြစ်တဲ့ နေရာအထိ သွားရောက်စုံစမ်းဖို့ဆိုပြီး ကျနော်တို့ ကော်မရှင်အဖွဲ့တွေ တနင်္သာရီ မြစ်အတိုင်း ၂ ရက်ကျော် ၃ ရက်လောက် လှေစီးရတဲ့ ကော့မပြင်းရွာအနီးအထိ ရောက်လာပါတယ်။ ကော့မပြင်း အပေါ်နားရှိ တနင်္သာရီမြစ်ဘေးက တဲတလုံးမှာ စခန်းချရင်းနဲ့ သရာဘွင်ချောင်းဖျား၊ ပ၀ ချောင်းဖျားဆီတက်ဖို့၊ အဲဒီကတဆင့် အခင်းဖြစ်တဲ့ တနင်္သာရီမြို့နယ် က၀က်ရွာအနီးအထိသွားဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိုးအရမ်းရွာနေပြီး ရေကြီးနေတဲ့အတွက် ခရီးစဉ်အထမမြောက်ဘဲ ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။
ရာသီဥတု ကောင်းတဲ့အချိန်မှာ ပြန်သွားတဲ့ နောက်တကြိမ် ခရီးစဉ်မှာတော့ ကျနော်တာဝန်နဲ့ ခရီးလွန်နေလို့ မပါတော့ပါဘူး။ အဲဒီခရီးစဉ်မှာ ကိုသိန်းဆောင်က အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၊ ကိုသောင်းထွန်းနဲ့ တခြားတဦး ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာအထိ သွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ပေမယ့် ဘာမှ အတိအကျ သိခွင့်မရခဲ့၊ သက်သေ အထောက်ထားလည်း ဘာမှမရခဲ့တဲ့အတွက် အဖြေထွက်တဲ့အထိ မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ အဲဒီကော်မရှင်မှာ ပါဝင်သူတွေက ပြောပါတယ်။
၂၀၃ တပ်ရင်းကနေ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားသူ ၁၃ ဦးကတော့ တပ်ကြပ်ကြီး ဘဦး၊ တပ်ကြပ်ကြီး အောင်ဘု၊ ဆက်သွယ်ရေး တပ်သား ဗလကြီး၊ တပ်သားတွေဖြစ်တဲ့ အောင်ဝင်း၊ မြင့်လွင်၊ ငါးခူ၊ ကြည်ငွေ၊ ခင်အေး၊ ၀င်းကျော်၊ အောင်ဌေး၊ ခင်ကျော်၊ တင်သိန်းနဲ့ ကျော်ညွန့်တို့ ဖြစ်တယ်လို့ ABSDF ဗဟိုက ထုတ်ပြန်တဲ့ ကျဆုံးစာရင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်က ၁၉၉၂ ခု၊ နေရာကတော့ တနင်္သာရီမြို့နယ် က၀က်ရွာလို့ ဖေါ်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
(တိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ ၅၉ ဦးနဲ့ ငှက်ဖျားအပါအ၀င် ရောဂါမျိုးစုံနဲ့ ကျဆုံးသွားသူများစာရင်းကို ဆောင်းပါးအဆုံးမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်)
အိမ်ပြန်ချိန်မှာ မိဘ မောင်နှမတွေကို ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ
ဒီဖြစ်စဉ်တွေကို ပြန်ပြောနေခြင်းဟာ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် အသက်ပေးသွားတဲ့ “ရဲဘော် သူငယ်ချင်း” တွေကို မမေ့ပျောက်စေဘဲ သမိုင်းမှတ်တမ်း တခုအနေနဲ့ အသေချာရှိနေစေဖို့ ကျနော် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အပိုင်းကတော့ ကာယကံရှင်တွေ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေက ဆက်လက် တာဝန်ယူရမယ့်ကိစ္စလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တဦးတည်း အမြင်ကတော့ ဒါတွေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ် အရေးယူရေး ဆိုတာထက် တောင်အဖရိကနိုင်ငံမှာ လုပ်သလိုမျိုး အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေး ကော်မရှင်တခုဖွဲ့ပြီး အားလုံး အမှန်တိုင်းပြောကြဖို့၊ သမိုင်းမှတ်တမ်း တခုအနေနဲ့ ထိမ်းသိမ်းထားတာမျိုးကို ပိုလိုချင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုဆိုရင် ABSDF ဥက္ကဌဟောင်း ၃ ဦးတောင် ပြည်တော်ပြန်ပြီးတဲ့ အခြေနေအထိ ရောက်နေပြီဆုိုတော့ ဒီဖြစ်စဉ်တွေကို တနေ့မဟုတ်တနေ့ အနှေးနဲ့အမြန် ကျနော်တို့ ထုတ်ပြောရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥက္ကဌဟောင်း ၃ ဦးရဲ့အိမ်ပြန်ခြင်းဟာ တောခိုကာစက ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ထားသလို အိမ်ပြန်ခြင်းမျိုး မဟုတ်သေးပေမယ့်လည်း အခြေနေအရ ဒါမျိုးပြန်ရတာကို အပြစ်ပြောဖို့ ခက်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေတုန်းကတော့ ဒါတွေကို ထုတ်ပြောလိုက်ရင် ဘုံရန်သူ စစ်အစိုးရအကြိုက်ဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြား အချင်းချင်း ပဋိပက္ခပိုကြီးလာမလားလို့ စိုးရိမ်ရင်းနဲ့ မြိုသိပ်ထားခဲ့ရတယ်လို့ ကျနော် နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို တချိန်ချိန်မှာ ထုတ်ပြောရမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ တောခိုကျောင်းသားတိုင်းက ခံယူထားပြီး ထုတ်ပြောသင့်တဲ့အချိန်၊ ထုတ်ပြောပုံပြောနည်းပေါ်မှာပဲ အမြင်နည်းနည်း ကွဲနေတာဖြစ်မယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စဟာ ABSDF ဗဟိုမှာ တာဝန်ရှိသလို သက်ဆိုင်ရာ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေ တာဝန်ခံတွေ၊ စခန်းတာဝန်ခံတွေ၊ အဲဒီစခန်းတွေဆီ တောခိုတုန်းက အတူတူထွက်လာခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ၊ ရဲဘော်ဟောင်းတွေ တဦးချင်းစီမှာလည်း ဒီတာဝန်တွေရှိနေတယ်လို့ ကျနော် မြင်ပါတယ်။ ဥက္ကဌဟောင်း ၃ ဦး ပြည်တော်ပြန်ချိန်မှာ လူဦးရေ ၁၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ ဒီ ကျဆုံး၊ သေဆုံး ကိစ္စတွေကို သူတို့ ရှင်းပြတာ မကြားမိဘဲ မြောက်ပိုင်းက အမှုနဲ့ပဲ လုံးခြာလည်နေတာကိုသာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဥက္ကဌဟောင်းတွေနဲ့အတူ ပါသွားတဲ့ အမေရိကန်ရောက် တောခိုကျောင်းသားဟောင်း တဦးကတော့ သားပျောက်၊ သမီးပျောက် မိခင်တွေက လာမေးတဲ့အတွက် ABSDF ကျဆုံး၊ သေဆုံး စာရင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားရောက် တောခိုကျောင်းသားတွေ အခြေအနေကို သူကြိုးစားပြီး အကျဉ်းရုံး ရှင်းပြခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ထပ်ရှင်းပြနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရလိမ့်မယ်။ ကျဆုံး၊ သေဆုံး ရဲဘော်တွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို သူတို့သားသမီး ကျဆုံးပုံအကြောင်း အသေချာရှင်းပြဖို့၊ တရားဝင် ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြု၊ အမျှဝေ အခမ်းအနားတွေ ကျင်းပနိုင်ဖို့၊ နောက်တခါ မိသားစုတွေကို အားပေးစကားပြောဖို့ လိုနေတယ်လို့ အဲဒီကျောင်းသားက ကျနော်အပါဝင် ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကို ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
သူပြောသွားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုတင်လေးရဲ့ မိဘတွေအပါဝင် ထားဝယ်နယ်က ကျဆုံး၊ ပျောက်ဆုံး ရဲဘော်တွေအတွက် သူတို့မိဘဆွေမျိုးတွေကို ဘယ်လိုရှင်းပြရမှန်း မသိသေးပါ။ ဒါပေမယ့် တနေ့မှာတော့ ဒါတွေကို မလွဲမသွေ ရှင်းပြရမှာ သေချာပါတယ်။ အဲဒီတနေ့ဟာ သိပ်မကြာတော့ဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် ဘယ်နေ့ အိမ်ပြန်နိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ပြန်ခွင့်ရမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း မသိသေးပါ။ ဒါကြောင့် လောလောဆယ် ကျနော်တို့ အိမ်မပြန်နိုင်သေးခင်၊ ဘာမှ တရားဝင် ရှင်းမပြနိုင်သေးခင်မှာတော့ ကျနော်တို့ တောခိုခါစက အလွန်နည်မည်ကြီးခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးသီချင်းတပုဒ်ကို စာဖတ်ပရိသတ်အားလုံး နားဆင်ရင်း ကျဆုံး၊ သေဆုံး၊ ပျောက်ဆုံး ဖြစ်သွားကြတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ “ရဲဘော်သူငယ်ချင်း” အားလုံးအတွက် အမျှဝေ ဆုတောင်းပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ “သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီးစဉ်” ကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။
သီချင်းခေါင်းစဉ်က “အာဇာနည် သူရဲကောင်းများသို့” တဲ့ …
* ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် ရှေ့တန်းတနေရာ … အသက်ပေးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ရယ် … ဦးညွတ်လျှက် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။
* အာဏာရှင်ကို အမြစ်ဖြုတ်ဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ကာ … ကျဆုံးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ရယ် … အကြွေစောလို့ နှမျှောမိပါတယ်။
# (ဒီမိုကရေစီ တို့များရလို့ အိမ်ရာမြေကို ပြန်ကြတဲ့အခါ … ဆီးကြိုနေမယ့် မင်းတို့မိဘ မောင်နှမတွေ) … တို့များဘယ်လို ရှင်းပြရမယ် … တို့များဘယ်လို နှစ်သိမ့်ရမယ် … တွေးရင်းနဲ့ ၀မ်းနည်း မျက်ရည်လည်။
* နိုင်ငံတော်အတွက် အသက်ပေးကာရယ် … တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ရယ် … ကောင်းရာသုဂတိ လားကြပါစေကွယ်။
* မြန်မာပြည်မှာ တို့ကျောင်းသားတွေ … အောင်လံထူကာ ဂုဏ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ရယ် … ကောင်းမှုအားလုံး အမျှပေးဝေပါတယ်။
တိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ ၅၉ ဦး
၁၉၈၈ ကနေ ၁၉၉၇ အထိ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်း စစ်မြေပြင်မှာ ကျဆုံးသွားသူ မင်းသမီး စခန်း အမှတ် ၂၀၁ တပ်ရင်းမှ ၅ ဦးစာရင်းကို တာဝန်ယူမှုအလိုက် တန်းစီ ပြောရမယ်ဆိုရင် တပ်ရင်းမှူး ကိုဇော်သန်း (ထားဝယ်မြို့၊ တလိုင်းမရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာလမ်း။ ဒုတိယနှစ် ဓာတုဗေဒ၊ ထားဝယ် ကောလိပ်)။ ကျဆုံးချိန်က ၁၉၉၇ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့ဖြစ်ပြီး နေရာကတော့ ကျွန်းစုမြို့နယ် မိုးမလင်းကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒုရင်းမှူး ကိုမင်းဇော်သူ (ထားဝယ်မြို့၊ သင်္ဘောဆိပ်ရပ်ကွက်။ ဒုတိယနှစ် စက်မှုသိပ္ပံ၊ ကလော)။ ကျဆုံးချိန်က ၁၉၉၃ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်ဖြစ်ပြီး နေရာက ရနောင်းမြို့မှာ လုပ်ကြံခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်ရေးအရာရှိ ကိုဇော်မင်း (ပုလောမြို့နယ်၊ ရှပ်ပုံကျေးရွာ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးသိပ္ပံ/ ဒီပလိုမာ၊ စာပေးစာယူ ဒုတိယနှစ်)။ ကိုမင်းဇော်သူနဲ့ အတူ ရနောင်းမှာ လုပ်ကြံခံရ။ တပ်ခွဲမှူး ကိုဖေသင် (ပုလောမြို့၊ အမှတ် ၅ ရပ်ကွက်။ ၁၀ တန်း)။ ကျဆုံးချိန် ၁၉၉၁ ဖြစ်ပြီး နေရာကတော့ ပုလောမြို့နယ် တန်းရှင်းရွာမှာ န၀တက ဖမ်းမိပြီးမှ အသတ်ခံရတာလို့ သိရပါတယ်။ တပ်ခွဲမှူး ကိုသိန်းမြင့်ကျော် (ရေဖြူ မြို့နယ်၊ ကံပေါက်ရွာ။ ၁၀ တန်း)။ ၁၉၉၆ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့။ ကျွန်းစုမြို့နယ် မိုင်းသွေးရွာမှာ န၀တက ဖမ်းမိပြီးမှ အသတ်ခံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒု တပ်ခွဲမှူး ကိုမျိုးအောင် (ပုလောမြို့နယ်၊ တောင်ယာကမ်းရွာ။ တတိယနှစ်၊ စာပေးစာယူ)။ ၁၉၉၁ ဖေဖော်ဝါရီလ။ ပုလောမြို့နယ် တန်းရှင်ရွာတိုက်ပွဲ။ ဒု တပ်ခွဲမှူး ကိုအောင်နိုင် (ပုလောမြို့နယ်၊ တောင်ယာကမ်းရွာ။ တတိယနှစ် စက်မှုသိပ္ပံ၊ ဖားအောက်) ၁၉၉၄၊ ဇွန်လ ၂၉-ရက်။ ပုလောမြို့နယ် အ ရှေ့ကုန်းကျေးရွာတိုက်ပွဲ။ ဒု တပ်ခွဲမှူး ကိုဝင်းမြင့်လေး (ပုလောမြို့နယ်၊ တောင်ယာကမ်းရွာ။ ၉ တန်း )။ ၁၉၉၅ ဒီဇင်ဘာလ။ ကျွန်းစုမြို့နယ် စတိန်ကျွန်းတိုက်ပွဲ။ တပ်စုမှူး စောပိုလို (ပုလောမြို့ အမှတ် ၃ ရပ်ကွက်။ ၁၀ တန်း)။ ၁၉၉၇ မတ်လ။ တနင်္သာရီမြို့နယ် ကျောက်လုံးကြီးကျေးရွာ။ တပ်စုမှူး ကိုလေး (လောင်းလုံးမြို့နယ်၊ နခံတောရွာ)။ ၁၉၉၇ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်။ ကျွန်းစုမြို့နယ် မိုးမလင်းကျွန်း တိုက်ပွဲ။ တပ်စုမှူး ကိုလွန်းတင် (မြိတ်မြို့၊ ဘီအိုစီရပ်ကွက်)။ ၁၉၉၂။ ပုလောမြို့နယ် လယ်ဖက် ကျေးရွာ။ တပ်ခွဲအရာခံ ကိုဇော်နိုင်အောင် (ထားဝယ်မြို့၊ တလိုင်းမရပ်ကွက်။ ဒုတိယနှစ် ဓာတုဗေဒ၊ ထားဝယ်ကောလိပ်)။ ၁၉၉၁ မတ်လ ၁၃ ရက်။ ပုလောမြို့နယ် ဇရပ်ဆိပ်ကျေးရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်ခွဲအရာခံ ကိုတင်နိုင်ဝင်း (တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ ၁၀-တန်း)။ ၁၉၉၆ ဧပြီလ။ ကျွန်းစုမြို့နယ် ကျောက်ကုန်းကျေးရွာတိုက်ပွဲ။
ဒု တပ်စုမှူး ကိုတင်ဝင်းမောင် (ရေဖြူမြို့နယ်၊ ကံပေါက်ဒေသ။ ၈ တန်း)။ ၁၉၉၁။ ရေဖြူမြို့နယ် ရေပုံးကျေးရွာတိုက်ပွဲ။ ဒု တပ်စုမှူး ကိုသန်းကြည် (ပုလောမြို့နယ်၊ သင်္ကန်းတောရွာ)။ ၁၉၉၇ မေလ။ ကျွန်းစုမြို့နယ် ကပကျွန်းတိုက်ပွဲ။ တပ်စိပ်မှူး ကိုသန်းဖေ (မြိတ်မြို့၊ ကျောက်တောင်ရွာ) ၁၉၈၉။ တန သာင်္ရီမြို့နယ် ကျားခေါင်းရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်စိပ်မှူး ကိုဟန်ဝင်း (ပုလောမြို့နယ်၊ မင်းပြင်ထိန်ရွာ။ ၁၀ တန်း )။ ၁၉၉၁။ ပုလောမြို့နယ် တပိုရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်စိပ်မှူး ကိုကိုဦး ခေါ် ကံဦး (မြိတ်မြို့ ကွက်သစ် ဒီ။ ၉ တန်း )။ ၁၉၉၂။ ပုလောမြို့နယ်၊ တပိုရွာ။ တပ်စိပ်မှူး ကိုညွန့်ဝင်း (ပဲခူးတိုင်း၊ ဝေါ်မြို့နယ်၊ ညောင်ခါးရှည်ရွာ။ ၈ တန်း)။ ၁၉၉၁ ဇူလိုင် ၆ ရက်။ သရက်ချောင်းမြို့နယ် စော်ဖျားရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်စိပ်မှူး မောင်မြင့် (မြိတ်မြို့) ၁၉၉၅ သြဂုတ်လ ၃၁ရက်။ ပုလောမြို့နယ် မြစ်ချဉ်စုရွာ။ တပ်စိပ်မှူး တိုင်းကျော် (ပုလောမြို့နယ်၊ ကျောက္ကာရွာ။ ၈ တန်း)။ ၁၉၉၃။ ပုလောမြို့နယ် လိပ်ဥသောင်ကျေးရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်စိပ်မှူး ဌေးဝင်း ( ပုလောမြို့နယ်၊ ရှပ်ပုံရွာ)။ ၁၉၉၅ ဒီဇင်ဘာလ။ ကျွန်းစုမြို့နယ် စဒိန်ရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်စိပ်မှူး မောင်မြင့် (၂) (ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ကြံ့ချောင်းရွာ)။ ၁၉၉၅ ဒီဇင်ဘာ။ ကျွန်းစုမြို့နယ် စဒိန်ရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်စိပ်မှူး သိန်းရွေ ခေါ် ပါးမဲ (ရေဖြူမြို့နယ်၊ ကလိန်အောင်ရွာ) ၁၉၉၇ မေလ။ ကျွန်းစုမြို့နယ် ကပကျွန်းတိုက်ပွဲ။ တပ်စိပ်မှူး အေးဝင်း ခေါ် အရှည်ကြီး (ပုလောမြို့နယ်၊ တန်းရှင်းရွာ) ၁၉၉၇ မေလ။ ကျွန်းစုမြို့နယ် ကပကျွန်း တိုက်ပွဲ။ တပ်စိပ်မှူး ကိုအေးကို ခေါ် ပြားကြီး (ပုလောမြို့နယ်၊ ပလရွာ)။ ၁၉၉၃ ဇွန်လ။ မြိတ်မြို့နယ် သစ်ယာဝတိုက်ပွဲ။ တပ်စိပ်မှူး ထွန်းသိန်း ခေါ် ဘငြီး (လောင်းလုံးမြို့နယ်။ ကြက်လွတ်ရွာ) ၁၉၉၇ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်။ ကျွန်းစုမြို့နယ် မိုးမလင်းကျွန်းတိုက်ပွဲ။
ဒု တပ်စိတ်မှူး ကိုမင်းဆွေ (မြိတ်မြို့၊ ကွက်သစ် ဘီ။ ၈ တန်း)။ ၁၉၉၂။ ပုလောမြို့နယ် လိပ်ဥသောင်တိုက်ပွဲ။ ဆေးမှူး ကိုအေးဝင်း (ထားဝယ်မြို့၊ ရှမ်းမလည်ဆွဲရပ်။ ၉ တန်း)။ ၁၉၉၁ ဇူလိုင် ၆ ရက်။ သရက်ချောင်းမြို့နယ် စော်ဖျားရွာတိုက်ပွဲ။ စည်းရုံးရေးဌာနအဖွဲ့ဝင် ကိုစံသိန်း (မြိတ်မြို့) ၁၉၉၂။ ကျွန်းစုမြို့နယ် စပါးတောင်တိုက်ပွဲ။ ဆက်သွယ်ရေးမှူး ကိုသက်နောင် (မြိတ်မြို့) ၁၉၉၁ မတ်လ။ သရက် ချောင်းမြို့နယ် ကျောက်အိုင်ကျေးရွာ။ တပ်သား နေမျိုး (ပုလောမြို့နယ်၊ ကျောင်းနိမ့်ရွာ) ၁၉၉၂ မတ်လ။ ပုလောမြို့နယ် ကံမော်ကြီးကျေးရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်သား သန်းဇော် (ပုလောမြို့နယ်၊ ပလရွာ။ တတိယနှစ်-သမိုင်း)။ ၁၉၉၀။ ပုလောမြို့နယ် တိုရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်သား ၀င်းမြင့် ၁၉၉၀ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်။ ပုလောမြို့နယ် ပလရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်သားနေမျိုး ခေါ် ဖိုးနေမျိုး (ပုလောမြို့နယ်၊ မလိကျွန်း) ၁၉၉၀ သြဂုတ်လ။ ပုလောမြို့နယ် ပုလောကုန်းတိုက်ပွဲ။ တပ်သားမြင့်စိုး ခေါ် ဖွားရှင်မ (မြိတ်မြို့)။ ၁၉၉၀ အောက်တိုဘာလ။ ပုလောမြို့နယ် ကံမော်ကြီးရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်သား ကျော်မိုးနိုင် ခေါ် မောင်ကျဲ (ပုလောမြို့နယ်၊ ကျဲရွာ)။ ၁၉၉၁ စက်တင်ဘာ ၂၃-ရက်။ ပုလောမြို့နယ် ပလရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်သား မောင်ချို (ရေဖြူမြို့နယ်၊ ကံပေါက်ရွာ။ မဂင်ရပ်)။ ၁၉၉၀ ဇူလိုင်လ။ ရေဖြူမြို့နယ် ပုလဲဂူရွာ။ တပ်သား မောင်တိတ် (မြိတ်မြို့)။ ၁၉၉၇ အောက်တိုဘာ။ ကျွန်းစုမြို့နယ် မိုးမလင်းကျွန်းတိုက်ပွဲ။
တပ်သား မင်းစိုး ခေါ် မဲခင် (ပုလောမြို့နယ်၊ ရှပ်ပုံရွာ)။ ၁၉၉၄ စက်တင်ဘာ။ ပုလောမြို့နယ် ကံမော်ကြီးတိုက်ပွဲ။ တပ်သားဇော်လင်း (ပုလောမြို့နယ်၊ ရှပ်ပုံရွာ)။ ၁၉၉၄ စက်တင်ဘာ။ ပုလောမြို့နယ် ကံမော်ကြီးတိုက်ပွဲ။ တပ်သားရဲဝင်း (ပုလောမြို့နယ်၊ ပလရွာ)။ ၁၉၉၃။ ပုလောမြို့နယ် လိပ်ဥသောင်ရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်သား သန်းထွန်း (ပုလောမြို့နယ်၊ ကဒဲရွာ)။ ၁၉၉၂ ဇန်န၀ါရီ။ ပုလောမြို့နယ် ဆင်ထိုးကြီးရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်သားဝင်းမောင် (ပုလောမြို့နယ်၊ ၅ မိုင်ရွာ)။ ၁၉၉၂ စက်တင်ဘာလ။ ပုလောမြို့နယ် လိပ်ဥသောင်ကျေးရွာ။ ထောက်လှမ်းရေး တပ်သား တာတီး ခေါ် စန်းမြင့် (ထားဝယ်မြို့ နယ်၊ တောင်သုံးလုံးရွာ)။ ၁၉၉၅။ သရက်ချောင်းမြို့နယ် ကျောက်အိုင်ရွာ။ ဆေးမှူး ဘမြင့် ခေါ် ဦးရင် ( ပုလောမြို့နယ်၊ ဇရပ်ဆိပ်ရွာ)။ ၁၉၉၇ မေလ။ ကျွန်းစုမြို့နယ် ကပကျွန်းတိုက်ပွဲ။ တပ်သား အိုသောင်း (မြိတ်မြို့၊ ပြင်ဝန်းရပ်)။ ၁၉၉၀ ဇူလိုင်လ။ ရေဖြူမြို့နယ် ပုလဲဂူရွာ။ တပ်သား လှဝင်း (ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ကြတ်ချောင်းရွာ)။ ၁၉၉၁ ဧပြီ။ ထားဝယ်မြို့နယ် ကလက်ကြီးရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်သား ဟန်မင်းစိုး ( မြိတ်မြို့၊ ကံဖျားရပ်)။ ၁၉၉၁။ ပုလောမြို့နယ် တန်းရှင်းရွာမှာ ခွဲမှူး ကိုဖေသင် နဲ့အတူအဖမ်းခံရ။ တပ်သား ဆန်းလွင် (ပုလောမြို့နယ်၊ ပေါင်းရွာ)။ ၁၉၉၀။ ပုလောမြို့နယ် ကျဲရွာတိုက်ပွဲ။ တပ်သား ရေခါး (ပုလောမြို့နယ်၊ မိန်းမမြို့ရွာ)။ ၁၉၉၃။ ကျွန်းစုမြို့နယ် အညင်ကျွန်းတိုက်ပွဲ။
တပ်သား အောင်လွင် (ပုလောမြို့နယ် သင်္ကန်းကျဲရွာ)။ ၁၉၉၃။ တပ်သား ဆန်းကျော် (ပု လောမြို့နယ်၊ တိုရွာ)။ ၁၉၉၃။ ထားဝယ်မြို့နယ် ကလက်ကီးတိုက်ပွဲ။ တပ်သားရွေတင် (တနသာင်္ရီ မြို့နယ်၊ သရဘွင်ရွာ)။ ၁၉၉၇ မေလ။ ကျွန်းစုမြို့နယ် ကပကျွန်းတိုက်ပွဲ။ တပ်သား စိုးစိုး ၁၉၉၇ မေလ။ ကျွန်းစုမြို့နယ် ကပကျွန်းတိုက်ပွဲ။ တပ်သား သီဟ ၁၉၉၇ မေလ။ ကျွန်းစုမြို့နယ် ကပကျွန်းတိုက်ပွဲ။ တပ်သားပေါ်ဦး (ပုလောမြို့နယ်၊ တန်းရှင်းရွာ)။ ၁၉၉၅။ ပုလောမြို့နယ် ကျောက်သင်္ဘောရွာမှာ ဖမ်းဆီး အသတ်ခံရ။ တပ်သား အောင်စွမ် (ပုလောမြို့နယ်၊ ရှပ်ပုံရွာ)။ ၁၉၉၅။ ပုလောမြို့နယ် ကျောက်သင်္ဘောရွာမှာ ဖမ်းဆီးအသတ်ခံရတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ငှက်ဖျားအပါဝင် ရောဂါမျိုးစုံနဲ့ ကျဆုံးသွားသူများ
ငှက်ဖျားအပါဝင် ရောဂါနဲ့သေဆုံးသူ ၁၀ ဦးကတော့ စခန်းကော်မတီဝင်ဟောင်း ကိုဉာဏ်စိုး (ရေဖြူမြို့နယ်၊ ကံပေါက်ဒေသ။ စားပေးစာယူ ဒုတိယနှစ် သမိုင်း)။ ၁၉၉၉ ဇူလိုင်လ။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ ဆေးရုံတခုမှာ ကွယ်လွန်။ အထူးတာဝန် စောလားဒို (တံတားဖြူအနီး၊ လှုိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ပထမနှစ် သချာင်္၊ လှိုင်နယ်မြေ)။ ၁၉၈၉ မတ်လ ၁၃ ရက်။ ပဲဖျားရွာ သရက်ချောင်းမြို့နယ်မှာ ကွယ်လွန်။ တပ်စိပ်မှူး ၀င်းမောင် (ပုလောမြို့နယ်၊ ပြင်ဘုကြီးကျွန်း)။ ၁၉၉၇။ ဘောတီရွာ။ တပ်မဟာ ၄ နယ်မြေမှာ ကွယ်လွန်။ တပ်စိပ်မှူး မြင့်ဇော် (ပုလောမြို့၊ အမှတ် ၃ ရပ်ကွက်။ ၁၀ တန်း)။ ၁၉၉၂ အောက်တိုဘာ။ မင်းချမ်းတောင် ကျွန်းစုမြို့နယ်မှာ ကွယ်လွန်။ တပ်စိပ်မှူး အောင်ကျော်ထူး (ပုလောမြို့ နယ်၊ နန်းတောင်ရွာ)။ ၁၉၉၉ မတ်လ။ ဘန်ကောက်ဆေးရုံမှာ ကွယ်လွန်။ ဆက်သွယ်ရေး တပ်သား အောင်ဆန်း (ပုလောမြို့ အမှတ် ၂ ရက်ကွက်။ ၁၀ တန်း)။ ၁၉၉၁ နိုဝင်ဘာလ။ မင်းသမီးစခန်းဆေးရုံမှာ ကွယ်လွန်။ တပ်သား ရဲထွတ် (ထားဝယ်မြို့နယ်၊ မောင်မယ်ရှောင်ရွာ။ ၁၀ တန်း)။ ၁၉၈၉ သြဂုတ်လ။ ထားဝယ်မြို့နယ် အိုင်ဝိုင်းရွာမှာ ကွယ်လွန်။ ကျောင်းဆရာ ကိုသက် (ရန်ကုန်။ ဒုတိယနှစ် မြန်မာစာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)။ ၁၉၉၂ ဇန်နာဝါရီ။ ဘန်ကောက်ဆေးရုံမှာ ကွယ်လွန်။ တပ်သား ၀င်းတင် (လောင်း လုံးမြို့နယ်၊ နခံတောရွာ)။ ၁၉၉၀။ ကထောင်းနီရွာ ထားဝယ်မြို့နယ်မှာ ကွယ်လွန်နဲ့ တပ်သား အောင်စိုး (ပုလောမြို့နယ်၊ ကျောက္ကာရွာ)။ ၁၉၉၅။ ထပ်စကဲဆေးရုံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကွယ်လွန်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံသူ ၂ ဦးကတော့ တပ်စုမှူး အောင်ဇင် (မြိတ်မြို့။ မြို့မ ၂ရပ်ကွက်)။ ၁၉၉၁ အောက်တိုဘာလ။ ထားဝယ်မြို့နယ် ကလက်ကီးရွာမှာ တာဝန်ထမ်းနေစဉ်နဲ့ ဆေးရဲမေ မကြူကြူလွင် (ပုလောမြို့နယ်၊ ရှပ်ပုံရွာ)။ ၁၉၉၅ ဇွန်လ။ မင်းသမီးစခန်း ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း သေဆုံးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေနစ်သေဆုံးသူ ၂ ဦးကတော့ ကိုညီညီလွင် (ထားဝယ်မြို့၊ အေးထီဆိုင်။ ထားဝယ်ကောလိပ်၊ ဒုတိယနှစ် ဓာတုဗေဒ) ၁၉၈၈၊ အောက်တိုဘာလ။ ကျောက်ထူရွာအနီး ထားဝယ်မြို့နယ်နဲ့ ကိုပြုံးချို။ (ပုလောမြို့နယ်၊ ပလရွာ)။ ၁၉၉၁ နိုဝင်ဘာလ။ ပြည်ခြားရွာအနီး ပုလောမြို့နယ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၃၄)
သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၄၄)
13 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website မောင်ပျာလောင် December 8, 2012 - 12:35 pm	စာအုပ်အဖြစ်ထုပ်ဝေသင့်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံများ မြေပုံများ နှင့် တီးဖြတ်သူအဖွဲ့ ဖြင့်
မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ထုပ်ဝေသင့်ပါတယ်။ အတိအကြ ဖြစ်ပုံများ မရပေမဲ့လည်း ရရှိထားသော
မှတ်သားမှုများအရ ပြည့်စုံလောက်ပြီလို့ ထင်ပါသည်။ အဖြစ်အပြက်တွင် သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသူများကလည်း မှတ်ချက်များပေး၍ ကူညီသင့်ပါသည်။
Reply	Nyi Nyi December 8, 2012 - 6:14 pm	ဆောင်းပါးအားလုံးစုပေါင်းပြီး စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေပေးပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျား ။
Reply	အောင်မိုး (ကနေဒါ) December 9, 2012 - 10:46 pm	ကိုထက်အောင်ကျော် နှင့်
သက်ဆိုင်ရာ/ တာဝန်ရှိ သူများ ခင်ဗျား
ကျနော်ကတော့ ကနေဒါ ရောက် ဘိတ်သားတဦးပါ။ ၈၈ ကတည်းက အိမ်ပြန်မရောက်နိုင်သေးတဲ့ တော်လှန်ရေး ရဲဘော်ဟောင်းတဦးပါ။
ဒညတ၊ PDF ၊DYF နှင့် ABSDF တို့ မှာ ၁၉၈၈ – ၁၉၉၅ အထိတာဝန်ထမ်းခဲ့ ဘူးပါတယ်။
ကျနော်ပြောချင်တာက အေဘီမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးသွားခဲ့ရတာတောင် အသိမှတ်ပြုခြင်းမခံရတဲ့ အေဘီရဲဘော် ကိုအေးလွင် အကြောင်းပါ။
ကိုအေးလွင်ဟာ၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တဦးအနေအဖြစ် ၁၉၈၈အရေးတော်ပုံကာလမှာ မြိတ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ကို စတင် ဖွဲစည်းတည်ထောင်ခဲ့ သူတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ဘုရားသုံးဆူ မွန် ဒေသရောက် ဘိတ် (မြိတ်) လူငယ်တွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တော်လှန်ရေး နယ်မြေများဖြစ်သော ဘုရားသုံးဆူ၊ ချင်းမှိုင်၊ ချွန်ဖွန်း၊ ရနောင်း နှင့် ဘန်ကောက်နယ်မြေများ ရှိ တော်လှန်ရေး။ နိုင်ငံရေး၊ လူမှု့ ရေး အဖွဲ့ စည်းများပေါင်းစုံစွာဖြင့် ကျဆုံးသည့်အချိန်အထိ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတဦး၊ အာဇာနည်ရဲဘော်တဦးပီသစွာ၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ၍ နောက်ဆုံးအသက်စွန့်သည်အထိပေးဆပ့်တိုက်ပွဲဝင်ကာသမိုင်းပေးတာဝန်ကျေပျွန်ခဲ့
ဘုရားသုံးဆူဒေသတွင် ကွေးဟော့စခန်း အစ ပိုင်း တွင်လည်းကောင်း၊ ထိုမှတဖန် ဒ ည တ (ဒီမိုကရေစီအင်အားများစည်းရုံးညီညွတ်ရေးတပ့်ပေါင်းစု)စခန်းများတွင်လည်းကောင်၊ နောက်တဖန် ချွန်ဖွန်းစခန်းတွင်လည်ကောင်း၊ နောက်ဆုံးမသေခင်အချိန်အထိ၊ အေဘီ ၂၀၁ (မိုးသီးဇွန်) (သို့ ) ၂၀၂ အောင်ဇေယျစခန်းတွင်တော်လှန်ရေးတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နေရင်းကျဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၂ ခု အေဘီ နှစ်ချမ်း ကွဲပြီးနောက်ပိုင်း ကိုကျော်ရ (၂၀၁ မင်သမီး) က၊ ကိုမိုးသီး ဘက်မှာပါဝင်လုပ့်ကိုင်တဲ့အခါ၊ အဲဒီအချိန်က ကိုကျော်ရ၏ အကူအညီတောင်းမှု့ ကြောင့်၊
လဲအကြောင်းအမျိုးမျိုကြောင့် ဘန်ကောက်တွင်ရောက်နေကြတဲ့ ကိုလှမော်၊ ကိုထွန်းရှိန်၊ ကိုအေးသော်(၂၀၁) ယ္ခု့ အမေရိကန် ၊ (ကိုအေးလွင် – ကျဆုံး)တို့ နှင့် ဘိတ်သားအတော်များများ ဟာ တတ်နိုင်သည့်ဘက်တွေက ကိုကျော်ရတို့ နှင့်အတူရပ့်တည် ကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုအေးလွင် (ဒ၊ည၊တ တပ့်ဖွဲ့ ဝင်ဟောင်း၊ ကိုကျော်ရတို့ နှင့် အတူ အဲဒီအချိန်တုံးက အေဘီ မှာ တပ့်ဖွဲဝင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းနေသူ ) ဟာ ၂၀၂ တပ့် ရင်း အတွက် ချင်းမိုင် မြို့ အဆက်သွယ်များ ထံမှ တပ့် ရန်ပုံငွေရယူနိုင် ရန် အတွက် ချင်းမိုင်မြို့ ကို သွားဘို့ တာဝန်ပေး လိုက်တာ ဆိုင်ကယ်တိုက်ခံရ ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
မတော်တဆဖြစ်မှု့ လို့ တချို့ ယူဆကြပေမယ့်၊ကျနော်သိခဲ့ကြားခဲ့ရသလောက်တော့လုပ့်ကြံခံခဲ့ရတာလို့ သိရ
ပါတယ်၊ ဘယ်အဖွဲကဘယ်လိုဘယ်သူတွေကလုပ့်သွားခဲ့ကြတာလဲဆိုတာတော့တိတိကျကျ မသိခဲ့ရပါ။
(စကားချပ့်။ ။အေဘီကွဲနေချိန်မို့ ၊ အေဘီအဖွဲ အချင်းခြင်းထဲကဟုမထင်စေလိုပါ။ ဖြစ်လဲလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ၊ ဗမာအစိုးရ ဘက် ကနှင့် ယိုးဒယားဘက်တွေက ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို အဲဒီအချိန်က ဗမာအစိုးရ ၊ယိုးဒယား အစိုးရ နှင့် စီးပွါးရေး သမားများ ဘက်ကလည်း ကိုကျော်ရတို့ အဖွဲ့ ဆို အသဲအသန်ကိုလိုက်စုံစမ်းနေကြတဲ့ ချိန်မို့ပါ။)
သို့ ပါသော်လည်း၊ ကြွေလွင့်သွားသော အေဘီ ရဲဘော်တဦးအဖြစ်အသိမှတ်ပြုခြင်းမခံရပါ။
(ကိုအေးလွင်) ရဲ့စာရင်း က အေဘီ-ဗဟို မှာရော မင်းသမီးစခန်းကထုတ်ထားတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ လည်း မပါဘူးလို့ကျနော်ထင်ပါတယ်။
သူကျဆုံးချိန်က၊ အေဘီ နှစ်ချမ်းကွဲနေတဲ့အချိန် ဖြစ်တဲ့အပြင် ထမ်းဆောင်ရတဲ့တာဝန်တွေကလဲ ရန်သူ ကြားမှာ လျှို့ ဝှက်ပြီး လုပ့်ခဲ့ကြရတာတွေ၊( မိမိအပါအဝင် အားလုံးရဲ့လုံခြုံရေးအရ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် လုပ့်လို့ မရခဲ့တာတွေ)..စတဲ့အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်လို့ ၊ မှတ်တမ်းတင်ဖို့ မေ့ခဲ့တာလို့ ဖြေတွေးလို့ ရပါတယ်။
ဒီလို မေ့လျှော့ကျန်ခဲ့ ကြ ရတဲ့ ၊ အမှန်တကယ်ပေးဆပ့်ခဲ့ကြတဲ့၊ အာဇာနည်ရဲဘော် အညတရသူရဲကောင်းတွေ လည်း ရှိနေကြဦးမှာပါ။
ဒါပေမယ့်၊ အဲဒီလိုကျန်ခဲ့တဲ့တယောက်၊ ရှိခဲ့မယ်၊ ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်၊ အဲဒီတယောက်ဟာ သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ပြုစုမှု့ မှာ အတော့်ကိုများတဲ့ တယောက်လို့ ပြောရမှာပါ။
ဒီဖြစ်စဉ်တွေကို ပြန်ပြောနေခြင်းဟာ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် အသက်ပေးသွားတဲ့ “ရဲဘော် သူငယ်ချင်း” တွေကို မမေ့ပျောက်စေဘဲ သမိုင်းမှတ်တမ်း တခုအနေနဲ့ အသေချာရှိနေစေဖို့ ကျနော် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ဆိုသလိုပါဘဲ့၊ အညတရသူရဲကောင်း တွေရဲ့အသက်၊ သွေး၊ ချွေး၊ ဘဝတွေ ပေးဆပ့်ကာ ရေးထိုးခဲ့တဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်း တခု ကို သမိုင်းမှတ်တမ်း တခုအနေနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် အတတ်နိုင်ဆုံး ပြည့် ပြည့်စုံ အောင် အားလုံးကျိုးစားပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားသင့်တယ် ဆို တဲ့ အချက်တခုဆိုတာ သက်ဆိုင်သူတွေကို သတိရစေချင်လို့ ပါ။ သိစေချင်လို့ ပါ။
Reply	Sam Tun December 10, 2012 - 11:44 am	I felt pain and many mixed feelings for everyone. For the write, really great job. Thanks.
Reply	အပြင်လူ December 10, 2012 - 8:04 pm	ရိုးရိုးသားသား ခန့်မှန်းပြောကြည့်မယ်နော်. စိတ်တော့ မဆိုးကြနဲ့ဗျို့။
ပျောက်သွားသူတွေကို (၄) ပုံပုံ၊
တစ်ပုံက မြန်မာပြည် ထောက်လှမ်းေ၇းလက်ချက်၊
နောက်ဆုံးတစ်ပုံက ကေအင်ယူလုပ်တာ။ (ကေအင်ယူက ပေါ်လစီကြောင့်တော့မဟုတ်၊ အောက်ခြေကလူတွေ လုပ်တာ)။
ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ ပြည်တွင်းက လူအချို့ကတော့ ၇မ်းသမ်းစွပ်စွဲမှာ၊ သူများအပေါ် ပုံချမှာတွေကတော့ လုပ်မှာသေချာတယ်၊ စိတ်သာချ။
ထောက်လှမ်းရေးက မလုပ်ပါဘူးလို့တော့ လာမပြောနဲ့၊ ပြောတဲ့လူခေါင်းမှာ ချိုပေါက်မှ ယုံမယ်။
က၇င်ပြည်နယ်လိုနေရာတွေမှာ ထောက်လှမ်းရေးသတ်ထားတဲ့ အရိုးတွေ တောင်လိုမပုံရုံတမယ်ပဲ။
Reply	A member of 201 Bat. December 11, 2012 - 9:42 pm	Dear A-pyin-lu,
Don’t make confusion. Evey one in the Minthamee area knew well who are killer.
There is no case to killing each others in the region but all were killed by some bad guys from KNU.
Reply	အပြင်လူ December 12, 2012 - 7:32 pm	Really ? Then prove it !
Intelligent personnel from Burma would be laughing at you and alikes who are naive enough to think that way.
I saw with my own eyes that one of your men was beaten by those guys for days.
There was many cases like that but I never saw they reached to any civil court in the regions I used to wander around.
Reply	Mr Good December 28, 2012 - 6:10 pm	Writer cover to N AB.so simple.be clever brother.
Reply	မင်းကြီးညို December 12, 2012 - 5:36 am	မျက်မှောက်ခေတ်ကာလမှာ ကျောင်းသားတွေက လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆို
တာ ဘယ်နိုင်ငံမှမရှိခဲ့ဘူး။ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ လာအို ဗီယက်နမ် တရုတ် မြောက်ကို
ရီးယား စတဲ့နိုင်ငံတွေ၊ အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာတောင် မရှိခဲ့ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံတခုတည်းသာ
ကျောင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အောင်မြင်မှု မရခဲ့ဘူး။ ကျောင်း
သားတွေရဲ့ အသက်တွေပဲ ပေးဆပ်ခဲ့ကြရတယ်။ သူတို့ရဲ့မိဘတွေက ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်
တွေအပေါ်မှာ အခဲမကြေဖြစ်ကြရတယ်။ သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်အဖြစ် နိုင်ငံတော်က အသိ
အမှတ်ပြု မခံရဘူး။ ဘာထောက်ပံ့ကြေး နစ်နာကြေးမှမရခဲ့ဘူး။ သင်္ခန်းစာယူစရာပါ။
Reply	Mg Myint 24 December 28, 2012 - 6:39 pm	Why dont oversea burmese(yebaw ye bat) cant help them?They have good car good job good home in third country.How can you think that government have to help them?Brother,please explain.Thanks.Eyyarwady News.I wanna see my post and reply.Trust You.Thanks
Reply	ဘမောင် December 19, 2012 - 5:44 pm	သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၀) နှင့် (၅၁) ကို
ဧရာဝတီမှာ Page not found error 404 ဖြစ်နေတယ်။
Reply	Atwin Lu December 28, 2012 - 10:52 am	How sad?Really feel sorry for them and their families.But,some of their friends(yebaw?) are having Xmas/New Year party at this time and talking about new car,house,job and drinking+smoking something…………And,thinking to go back MM & wanna makeagroup call RABLG(Return All Burmese Loser Group).Happy New Year to all.Thanks Ko Htet.
Reply	A member of 201 Bat. January 16, 2013 - 4:18 pm	တတိယ နိုင်ငံရောက် ရဲဘော်ဟောင်းတွေ ကားစီးတာ၊ စီးပွါးဖြစ်တာကတော့ သူတို့ကြိုးစား လို့ဖြစ်တာပဲ့လေ။ ပရိုပိုဆယ်ငွေနဲ့ ဖြစ်တာမှမဟုတ်ဘဲ၊
ဒါပေမဲ့ နယ်စပ်ကလူတွေနဲ့ ပြည်တွင်းက လူတွေကို မကူညီတာကတော့ တာဝန်ပျက်ကွက်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကလဲ ပြောရခက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တပ်ရင်းမှာ တာဝန်ထမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုကျော်ကျော် (ကချင်) က အခုထိ မြောက်ပိုင်း ABSDF-NB မှာ KIA နဲ့ပေါင်းပြီး အစိုးရထိုးစစ်ကို ခုခံနေဆဲ။ ဒါပေမဲ့ တချိန်က မင်းသမီးစခန်းရဲ့ စခန်းကော်မီတီဝင် ကိုဝင်းမင်းအပါဝင် ကျနော်တို့တပ်ရင်းမှာကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံဆီ တက်ဖူးတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲက ကိုဇော်ဦး၊ ကိုအောင်နိုင်ဦး၊ ကိုအောင်သူငြိမ်းတို့ကတော့ လက်ရှိ အစိုးရနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဗဟု အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။
နှစ် ၂၀ အတွင်းပြောင်းလဲသူတွေရှိသလို မပြောင်းမလဲ တိုက်ပွဲဝင်ဆဲသူတွေလဲ ရှိနေဆဲပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေ၊ အထူးသဖြင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရ သူတွေကို ငွေကြေးအဆင်ပြေနေသူတွေက ကူညီသင့်တာကတော့ အမှန်ပါဘဲ့။
တကယ်တော့ ကချင်တိုက်ပွဲဆိုတာဟာ ABSDF က တလျောက်လုံးပြောခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေးဟာ ခေါင်းနဲ့ပန်း လိုတွဲနေတယ်ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါပဲ့။ ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်မှာ ဒီမိုကရေစီရနေယုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားကိစ္စ အဆင်မပြေရင်လဲ ပြသာနာက ပြေလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
လိုင်ဇာ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး နှောင့်နှေးမှာ စိုးရိမ်ဟု ABSDF ပြော
အဖွဲ့ခွဲ တည်ထောင်တဲ့ ရဲဘော် နှစ်ဦး ABSDF က ထုတ်ပယ်
ရန်ပုံငွေအတွက် ကားပါမစ် ယူခဲ့ကြောင်း ABSDF ပြော
အနုတ်လက္ခဏာကနေ သုညအဆင့်ဆီ ပြန်ရောက်လာတဲ့ အပြောင်းအလဲ
သူပုန်ကျောင်းသား တဦးရဲ့ ပြည်တော်ပြန် ခရီးစဉ် (နိဂုံးပိုင်း)
အင်အားစု စုံညီ ညီလာခံ ကျင်းပရန် ABSDF တိုက်တွန်း
အစိုးရနှင့် ABSDF ပြည်နယ်အဆင့် အပစ်ရပ် လက်မှတ်ထိုး